थाहा खबर: कांग्रेस उम्मेदवार डा. प्रकाशरण महतलाई १० प्रश्‍न, काठमाडौं ५ नै किन रोज्‍नु भो?
कांग्रेस उम्मेदवार डा. प्रकाशरण महतलाई १० प्रश्‍न, काठमाडौं ५ नै किन रोज्‍नु भो?
'म पनि कांग्रेसको सिनियर पंक्तिमै छु'
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति, संसदीय समिति (बोर्ड) सदस्य रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.प्रकाशशरण महत विगत तीन दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। ०३५ देखि काठमाडौंको बाँसघारीमा बसोवास गर्दै आएका महत ०१६ मा नुवाकोटको कविलासमा जन्मिएका हुन्।
काठमाडौंको शान्ति विद्यागृह हाइस्कुल लैनचौरमा माध्यमिक शिक्षा आर्जन गरेका डा. महतले उच्च शिक्षा महाराजगञ्ज क्याम्पस, कीर्तिपुर क्याम्पस र अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ इलिनोयज र साउदर्न इलिनोयज युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका छन्। ०३९ देखि ०४४ सम्म नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेका महत ०६३ मा व्यवस्थापिका संसद् सदस्य तथा ०६४ र ०७० मा संविधानसभा सदस्य भएका थिए।
पार्टी नेता डा. महतसँग उनकै निवास महाराजगञ्जमा थाहाखबरका लिलाराज खनालले गरेको कुराकानीको
मतदातासँगको भेटघाट कहाँ पुर्‍याउनुभयो?
म लगभग सबै मतदाताको घर दैलोमा पुगिसकेको छु।
सबैले विश्वास र भरोसा व्यक्त गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ। मेरो जित सुनिश्चित छ।
तपाई‌ले जित्ने आधार के हो?
हामी चुनाव जित्छौं, विगत दुई पटकसम्म निर्वाचन लगातार हामीले जितेका हौं। यहाँका मतदाता सचेत हुनुहुन्छ। एमालेको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन बनाएर ५० औं वर्ष शासन गर्ने उहाँहरुको घोषणापछि जनतामा उहाँहरुप्रति विश्वास घटेको छ।
हिँजोका दिनमा कम्युनिस्‍ट पार्टीको नाम भए पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार चल्छौं, संसदीय अभ्यासमा आउँछौं, विधिको शासनमा जान्छौं भनेकोले जनताले पनि प्रोत्साहित गरेका थिए। हिँजो तोडफोड, हिंसा र बन्दको राजनीतिबाट जनता आहत भए। यस्तो अवस्थामा देशमा लगानी आउँदैन, लगानी नआएसम्म उद्योग व्यवसाय हुँदैन। जसले गर्दा रोजगारी बढ्दैन र मुलुकमा समृद्धिको सम्भावना छैन।
सरकारको बजेट बढ्दैन, करको दायरा बढ्दैन र सरकारले पूर्वाधारमा, जनताको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न सक्दैन्। जसले गर्दा वाम दललाई कांग्रेसले पनि धेरै प्रोत्साहित गरेको हो। तर, उहाँहरु उल्टो बाटोमा जाने भइसकेपछि कांग्रेस नै एक मात्र लोकतान्त्रिक पार्टी रहेछ भनेर जनताले विश्वास गर्न थालेका छन्।
कांग्रेसले नै विधिको शासन सुरु गर्न सक्छ, अरुमा भरपर्नु हुँदैन भन्ने एउटा धारणा विकसित भएको पाइन्छ। देशैभरी कांग्रेसको पक्षमा जनलहर आइरहेको छ। त्यसैगरी, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर पाँचमा यसै पनि मतदाता कांग्रेसप्रति छन्, त्यसमा पनि जनताको अधिकारमाथि निषेध र नियन्त्रण गर्ने बाटोमा वाम गठबन्धन लागेपछि त्यसको खिलाफमा यहाँका जनता उभिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले नै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने मतदातालाई विश्वास लागिरहेको छ।
घरदैलो अभियानको क्रममा डा.महत
यो क्षेत्रका जनताले विपक्षी एमालेका उम्मेदवारलाई एकपटक यहाँका जनताले जिताएर परीक्षण गरिसके र मतदाता उहाँहरुसँग रुष्ट नै भइसकेका छन्। त्यसैले यहाँका जनताले कांग्रेसका उम्मेदवार नरहरि आचार्यलाई दुई/दुई पटक जिताएर पठाएका हुन्। उहाँ अस्वस्थ भएको कारण पार्टीले मलाई उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।
काठमाडौं ५ नै कसरी तपाईंको रोजाइमा पर्‍यो?
म ०३४/३५ देखि काठमाडौंमा बस्दै आएको छु। ६ कक्षादेखि लैनचौरको स्कुलमा म पढ्दैआएको हुँ। विद्यार्थी जीवनदेखि नै हरेक आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यही ठाउँमा सक्रिय हुँदै आएको छु। पार्टीले त्यही भएर यो दायित्व अर्थात् जिम्मेवारी यो ठाउँमा दिइसकेपछि पूर्ण समर्थनका साथ म काम गर्छु।
मलाई नै साथ दिने र समर्थन गर्ने मनसायले समस्या समाधानको लागि सुझाव आएको हो। कांग्रेसको पक्षमा माहोल बढ्दै छ, विपक्षी साथीप्रतिको आकर्षण घट्दै छ। यहाँ हामी सहज रुपमा जित्छौं।
यो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईं नयाँ हो, बाहिरबाट आएको जस्तो आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि?
म त यहाँबाट प्रतिनिधित्व नगरे पनि यहीँ छु। विगतमा राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले खेलेको भूमिकाको आधारमा म नतिजा देखिने गरी काम गर्न तयार छु। यहाँका मतदातालाई थाह छ, भित्र बाहिर गर्दै ओखलढुंगा, झापा हुँदै यहाँ आएको व्यक्तिले बाहिरिया हुन्छ कि विगत ४० वर्षदेखि यहाँ बस्दै आएको व्यक्ति? हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा मेरो भूमिका रह्यो, त्यसवेलादेखि म यहीँबाट राजनीति गर्दै आएको छु।
हिँजो पार्टीले नरहरिजीलाई यहाँबाट उम्मेदवार बनाउनुभयो, मैले उहाँलाई सहयोग गरेँ, आज मलाई पार्टीले जिम्मेवारी दियो, मैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्छु।
तपाईले जित्दा र अरुलेले जित्दा के फरक पर्छ?
मेरो जुन प्रतिबद्धता छ, त्यो म पूरा गर्छु। काठमाडौंको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने, स्वच्छ सहर बनाउने, यहाँका सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्ने, त्यसका लागि केन्द्रबाट विशेष परियोजना ल्याउने, ढल, खानेपानी, पक्की सडक निर्माण, प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति दिलाउने काम म गर्छु। स्थानीय मतदाताबाट समस्या के हो भनेर सुझाव लिएको छु।
मेरो सिधा, स्पष्ट र सरल किसिमबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, मेरो स्वभाव र व्यवहार पनि त्यही हो
मेरो सिधा, स्पस्ट र सरल किसिमबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, मेरो स्वभाव र व्यवहार पनि त्यही हो। यहाँ आकास पाताल जोडेर गफ गर्ने, सपना बाँड्ने, काम नगर्ने, सय दिनमा सय कुरा गर्छु भनेर यहाँको एमालेबाट उठेका उम्मेदवारले मेयरमा जिते तर सय दिनमा उनले के काम गरे भनेर जनता त्यसको खोजिमा छन्।
महानगरका मेयरले पहिलो निर्णयमै मोबाइल बाँड्न भनेर आयो। यसरी उहाँहरु कुरा त धेरै गर्नुहुन्छ तर काम गर्नुहुन्न। प्रचार ज्यादा काम कम गर्ने उहाँहरुको बानी नै छ। हामी प्रचार कम, काम ज्यादा गर्ने गर्छौ। त्यसलै पनि कांग्रेसप्रति मतदाताको विश्वास बढी छ।
ईश्‍वर पोखरेल हेभिवेटको रुपमा देखिनुभएको छ, चुनाव जित्‍न कत्तिको सहज देख्‍नुभएको छ?
के को हेभिवेट? म पनि कांग्रेसको सिनियर पंक्तिमै छु। मैले ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालिसकेको छु। म कुनै पनि मानेमा उहाँभन्दा कमजोर छैन। मेरै पालामा अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको र करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ जुटाइएको हो। नेपाल-भारतबीचको फुजफ्फापुर ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण मेरै समयमा भएको हो। जसले गर्दा उपत्यका लोडसेडिङबाट मुक्त भएका छन्। मैले मेरो जिम्मेवारी निष्ठा र कुसलताका साथ सम्पन्न गरेको छु।
मेरो विपक्षी नेताभन्दा म धेरै जिम्मेवार मान्छे हुँ। भोली मैले जितेपछि आफ्नो अनुभवलाई उपयोग गर्छु। व्यवसाय र शिक्षालाई प्राथमिकता दिन्छु। मैलै अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेर आएको छु।
म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा वास्तविक कुटनीतिक सम्‍बन्ध स्थापना गर्न भूमिका खेलेँ। हाम्रो परराष्ट्र नीति असन्तुलित थियो। तर, म गइसकेपछि चीन र भारत दुवै देशसँग समान ढंगले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न भूमिका खेलें। आफ्नो स्वार्थ र अधिकारलाई प्राथमिकता दिएर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरें। त्यस अर्थले अब अन्तराष्ट्रिय लगानी बढ्दै छ।
मेरो विपक्षी नेताभन्दा म धेरै जिम्मेवार मान्छे हुँ। भोलि मैले जितेपछि आफ्नो अनुभवलाई उपयोग गर्छु। व्यवसाय र शिक्षालाई प्राथमिकता दिन्छु। मैलै अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेर आएको छु। नेपालको अर्थनीतिलाई सही बाटोमा समृद्धिको पक्षमा उपयोग गर्न नीजि क्षेत्रको सहभागिता र वितरणमा सीमान्तकृत वर्गपछि नपरुन् भन्नको लागि सरकारले एउटा लक्षित कार्यक्रम ल्याउने छु।
स्वास्थ्य, शिक्षा, मातृशिशुको कल्याण, पछाडि परेको समुदाय र क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेर उनीहरुलाई माथि उकास्ने भूमिका म खेल्न सक्छु। म कुनै पनि कोणबाट उहाँभन्दा कम छैन।
तपार्ईंको क्षेत्रका मतदाताको सुझाव वा गुनासो के पाउनुभएको छ?
यहाँका जनता सधैँ बन्दको विपक्षमा छन्। यहाँका मतदाताले खासगरी खानेपानी, ढल, दूषित नदी, फोहोर र डुबानको समस्या मुख्य रुपमा उठाउनुभएको छ। खेलमैदानको अभाव रहेको, महिलाहरुको शसक्तीकरण, उद्यमशिलता र सीप विकासको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने माग र गुनासो बढी मात्रामा आएका छन्।
धेरै महिला आत्मनिर्भर र जागृति अभियान चलाउन महिलाहरु चाहन्छन्। वृद्ध वृद्धाहरुको सामाजिक सुरक्षा, उनीहरु सामूहिक रुपमा छलफल गर्न पाउने खुला स्थान हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
यो क्षेत्रको लागि तपाईंले के योगदान दिन्छु भनेर सोच्‍नुभएको छ?
नम्‍बर एक मुलुक विधिको शासनमा गयो भने यहाँ स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रन्छ। लगानी आयो भने रोजगारी बढ्छ। यो ठाउँबाट निर्वाचित भए पनि यहाँका युवाको लागि आइटी अब निर्माण गर्ने र रोजगारीका अवसर वढाउने नै मेरो योजना छ।
दोस्रो यो सहर अव्यवस्थित छ। त्यसका लागि ढल, फुटपाथको व्यवस्था, राम्रो, सफा र सुघ्घर सडक, नाला र खोलालाई दुर्घन्धित हुनबाट बचाउने र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले समेत कभर नगर्ने स्थानमा खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने मेरो योजना छ। छहरेबाट त्रिशूली हुँदै तिब्बतको केरुङ जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छु।
बूढानीलकण्ठजस्तो ऐतिहासिक मठ मन्दिर, टोखाजस्तो सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएको स्थान र शिवपुरी जलाधार क्षेत्रमा जिप राइड खोल्ने प्रयास गर्ने र त्यसमार्फत पर्यटनको विकास गर्ने लक्ष्य मेरो छ। चितवन नेसनल पार्कमा जस्तो जिप राइड गर्न दिनुपर्छ। यसले गर्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिने र त्यसबाट उठ्ने निश्चित रकम स्थानीयस्तरमै खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
करिब २० वर्षभित्रमा उपत्यकालाई प्रदूषणमुक्त सहर बनाउनको लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने हो। नेपालमा विद्युत् उत्पादन पर्याप्त मात्रमा हुँदै गएको अवस्थामा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिन सम्भव पनि छ।
पेट्रोल र डिजेल खरिदमा बर्सेनि हुने खर्च घढ्छ। त्यसका लागि विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरु निर्माण गर्ने योजना बनाएको छु। मलाई लाग्छ १० वर्षमा त्यो पूरा गर्न सकिन्छ। किनकि त्यस्तो प्रविधिको विकासमा विस्तारित हुँदै छ। पेट्रोल डिजलजत्तिकै सस्तोमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहमा एमाले र माओवादीको मत जोड्ने हो भने कांग्रेसका उम्मेदवारले जित्‍न गाह्रो छ भन्छन् नि?
उहाँहरुले के सोच्‍नुभएको छ भने एमाले र माओवादी मिलेपछि हामी सबै स्थानमा जितिहाल्छौं भनेर हौसिनुभएको छ। राजनीति त्यो अर्थमेटिकमा चल्दैन। जनताले बुझेका छन, कम्युनिस्‍ट गठबन्धनलाई जनताले भोट दिनेवाला छैनन्।
उपत्यका र उपत्यकाबाहिर हामीलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनको हिसाबले पनि दुवै राप्रपाले सहयोग गरेका छन्। त्यसले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ। एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र मतदाता पनि विचलित छ। नेतृत्वले गलत निर्णय लियो भनेर। माओवादीका असन्तुष्ट मतदाताको पनि समर्थन मलाई छ। उहाँहरु गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको पक्षधर भएको नाताले हामीलाई ती मतदाताले भोट हाल्नेछन्।